Shaqaalaha Madaarka Aadan Cadde Ee Muqdisho Oo Saaka Sameeyey Mudaharaad Shaqo Joojin Ah – Saraar Media
Home›All War›Shaqaalaha Madaarka Aadan Cadde Ee Muqdisho Oo Saaka Sameeyey Mudaharaad Shaqo Joojin Ah
Shaqaalaha Madaarka Aadan Cadde Ee Muqdisho Oo Saaka Sameeyey Mudaharaad Shaqo Joojin Ah
Shaqaalaha Madaarka Aadan Cadde Ee Muqdisho Oo Saaka Sameeyey Mudaharaad Shaqo Joojin Ah Shaqaalaha ayaa la sheegay inay ka cabanayeen xaquuq la’aan iyo dhibataooyin kale ayna saaka sameeyeen inay shaqada joojiyaan taasoo hakad ku keentay howlihii caadiga ahaa ee garoonka ka socday.
Qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay in shaqo joojintan ay jawaab u tahay qoraalo shalay Shirkadda Favori ay u qeybisay shaqaaleheeda, taasoo ku saabsaneyd xuquuqda shaqaalaha.
Warqadan oo amar lagu bixiyey iney saxiixaan dhamaan shaqaalaha shirkadda waxaa ku xusnaa qodobo ay ka mid ahaayeen:-
In qofkii soo daaha mushaharkiisa lacag laga jarayo, iyadoo la ogyahay xaalada magaalada Muqdisho oo weeraro ay ka dhacaan wadooyinkana la iska xirto.
In qofkii loo dilo ama loo dhaawaco magaca shirkadda uusan wax xuquuq ah ku laheyn shirkadda.
Fasax la’aan qofkii shaqada ka maqnaada sadex cisho in shaqada laga ceyrinayo
In qofkii maqnaada toban cisho wax ka badan inuu shaqadiisa waayayo xitaa hadii uu fasax qaatay ama xanuunsan yahay iyo qodobo kale.
Wararka ayaa sheegaya in amarkan uusan quseynin ajaaniibta kale ee shirkadda u shaqeysa, uuna ku kooban yahay oo kaliya Soomaalida.
Shaqaalaha shirkadda ayaa si weyn uga dhiidhiyey amaradan iyagoo sheegay in shirkadda Favori ay dooneyso iney dhulkooda ku gumeysato ayna la soo baxday nidaamka ay ku shaqeeyaan shirkadaha dhiig miiradka ah.
Maamulka shirkadda Favori ayaa sidoo kale shaqaaluhu waxay ku eedeeyeen iney qiimeeyaan shaqaalaha kale oo ajnaniga ah sida kuwa ka soo jeeda Kenya oo mushahar badan qaata, aysana wax muhimad ah siinin Soomaalida.
Taliyaha hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha dowlada Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in Shaqaalaha Garoonka Aadan Cadde ay sameeyeen shaqo joojin mudo kooban socotay balse markii dambe arintaas ay xailiyeen.
Waxa uu xusay Taliyaha Hogaanka Socdaalka iyo Jinsiyadaha in Shaqaalaha ay ka cabanayeen xaquuq ka maqan iyo dhibaatooyin kale oo heysta isla markaana ay ku qanciyeen iney xaquuqdooda helayaan kana codsadeen in ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda .
Warar laga helayo ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan garoonka Aadan cadde ayaa sheegaya in wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlada Somalia ay asoo fara gelisay murankan, ayna shirkadda favori kala xisaabtameyso xuquuqda shaqaalaha u shaqeeya.
Migrants in Calais seeking asylum in the ...
Daawo: Cali Khaliif Galaydh oo ku eedeeyey ...